Akanjo an-jaza |
Ny zazavavy kely vita amin'ny landihazo vita amin'ny landihazo dia fohy fohifohy mandritra ny fotoana rehetra
Ny zanakao dia ho tia an'ireny panty be sandry ireny miaraka amina pirinty mahafinaritra sy famolavolana azo amin'ny haben'ny fonosana sy ny safidy famolavolana, izy rehetra dia ahitana sary pirinty mahafinaritra momba ireo olo-tianao anisan'izany i Elsa, Anna ary Olaf!
Ny haben'ny fonosana marobe misy, dia Cotton Combed 100% miaraka amina endrika tsy misy marika ho fampiononana faran'izay betsaka
Ny fonosana 12 dia mahatonga ny olona tsy ampoizina 12 andro farany. Tonga lafatra amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, Countdown ary fahafinaretana isan'andro.
Ny fonosana 'Andron'ny Herinandro' dia manolotra mpivady iray isan'andro isan'andro amin'ny herinandro.
Vokatra nahazo alàlana nomena anao tamin'ny alàlan'ny asa-tanana
Panty azo tsapain-tànana azo tsidihina ho an'ny ankizy
Fampahafantarana boxer tsy misy tag
Fampandehanana Flex Waistband
Tsy mety mitaingina
Taratasy fanaovana akanjo tanora miady amin'ny bakteria isan-karazany
Malemy fanampiny, plush
Feno rakotra seza feno
Valahana tsy misy Ravel
Maimaim-poana ny tag
Kapila vita amin'ny landihazo 100%
Manaova akanjo mahery vaika mahery vaika fanoherana fikoloana zaza kely tovovavy kely
Ny fehin-kevitray zazavavy dia natao tamin'ny lamba landihazo 100 isan-jato, fehin-kibo tsy misy fehin-kibo ary tongotra malemy vita amin'ny lamba malemy.
Sariitatra vita amin'ny pirinty tsara tarehy vita amin'ny pirinty OEM Ankizy Ankizy Ankizy
Loko: Pirinty sy valaka isan-karazany
Lamba malefaka be
Aza asiana tagy ny fohy amin'ny boxe
Sariitatra azo tsongaina mahafatifaty 100-130cm Ankizilahy Ankizy Akanjo mandritra ny fahavaratra
5,2 Oz ary vita amin'ny landihazo malefaka sy malefaka.
Preshrunk ho an'ny fitokisana azo antoka.
Voasaron'ny fanjaitra vozona vozony.
Akanjo malefaka miorina amin'ny akanjo marevaka eco malala maloto zazakely akanjo lava
Ny loko dia mety miovaova arakaraka ny fonosana; Ny landihazo marefo 100 isan-jato dia mitazona azy ho tsara sy milamina isan'andro
10-pack isan-karazany dia mety ahitana moka, pirinty na fitambaran'izy roa
Ny fatoran'ny tongotra malefaka sy voasarona dia tsy midika hoe misy elastika mikitroka
Masinina manasa malefaka Handfeel akanjo atin'akanjo ankizy ho an'ny zazavavy
Natao tamim-piononana sy tao an-tsaina, ny atin'akanjo vavy dia vita amin'ny landihazo malefaka, tsy misy fehin-tongotra sy marika tsy misy mangidihidy ary tsy misy marika. Hita amin'ny loko isan-karazany, pirinty ary fomba, ao anatin'izany ny hipsters, fohy, bikini ary zazalahy fohy, ny undies no tena mety amin'ny zazavavy amin'ny sokajin-taona rehetra.
Taratasy ho an'ny zaza malemy malemy paika malemy Eco miady amin'ny bakteria ho an'ny zazalahy kely
Kalitao Premium:Tovolahy 100% no anaovan'ny satrin'ireto zazalahy ireto. Ny fonosana tsirairay dia misy atin'akanjo malefaka miisa 6/10 miaraka amin'ny endrika sariitatra sy ny loko tsara tarehy indrindra.
Faharetana - Fitaovana landihazo manenjana, tsy mora simba, miloko na pilling ny lokony.
Famoronana milay- Ireny no ho tonga ny sakaizan'ny zanakao ankafiziny, satria samy manana ny endriny landihazo malefaka mahafinaritra izy ireo ary MAHAFALY tanteraka! Ny lamba mivelatra amin'ireto akanjo ba ireto dia tsy mampino fa malefaka sy miaina.
Waastband elastika - Ny fehikibo elastika dia mifanaraka tsara amin'ny andilana ary mora misintona sy midina, manenjana feno atin'akanjo dia tsy misy marika mena ary mahatonga ny fihetsiny malalaka kokoa
Landihazo malefaka tsy mitaingina ny fehin-tongony mangidihidy afaka manao akanjo anaty zazavavy kely
Akanjo malefaka malefaka mamolavola fanamiana atin'akanjo zaza tsy misy tonta
Logo: Jacquard, Fanontana, Fanjairana
Loko: loko Pantone na fefy
Volavola: mety ho ekena ny famolavolana namboarina na ny vokatra OEM.
Easy manasa Anti Static 100% landihazo Ankizivavy Zipo
Vita amin'ny landihazo 100%, mahazo aina kokoa ary afaka miaina kokoa